Daryeelka Waalidka Cusub - Caymiska Caafimaadka Degaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > ChildrenFirst ™ > Daryeelka Waalidka Cusub
Hel ilaa $150 kaadhadh hadiyadeed booqashooyinka dhakhtarka.
Noloshaadu waxay isu beddeshay mid mashquul badan. Miyayna ahayn in qorshahaaga caafimaad uu wax badan sameeyo?
Kaararka hadiyadda ee kuwa filaysa iyo waalidka cusub
$100 oo kaararka hadiyadda ah ka hor inta aanu ilmahaagu dhalan
$ 60 Kaarka hadiyadda ee booqashada ugu horreysa
Hel a $ 60 kaarka hadiyadeed loogu talagalay Amazon, Safeway, ama Target markaad booqato dhakhtarkaaga inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreeya.
Foomka Gudbinta Abaalmarinta Online ➜
$ 40 Kaarka Hadiyadda ee booqashada labaad
Hel a $ 40 kaarka hadiyadeed loogu talagalay Amazon, Safeway, ama Bartilmaameedka booqashada labaad ee dhalmada ka hor.
$50 kaarka hadiyadda ka dib marka ilmahaagu dhasho
Qaado $ 50 kaarka hadiyadda kadib marka ilmahaagu dhasho
Hel a $ 50 kaarka hadiyadeed loogu talagalay Amazon, Safeway, ama Target markaad booqato dhakhtarkaaga 1 illaa 12 toddobaad gudahood markaad dhasho.
Faa'iidooyin badan oo loogu talagalay waalidiinta cusub
CHPW's Healthy You, Healthy Program Haddii aad u baahan tahay daryeel takhasus leh ama fiiro gaar ah inta aad uurka leedahay - Taasna waa la daboolay.
Taariikhda Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa: Juun 30, 2022